Pisi Linux Marka ugu horeysa ee la heli karo | Laga soo bilaabo Linux
Pisi Linux Marka ugu horeysa ee la heli karo
Qeybin kale ayaa timid. Dhaxalsugaha Pardus Linux, Pisi Linux 1.0 Beta waa natiijada Anka-Team oo kaashaneysa baloog wax garanaya dhamaanteen (Yoyo Fernandez) iyo shaqada weyn ee Safayr xagga farshaxanka.
Pisi Linux waxay la timaaddaa Kernel 3.8.13, Firefox 21, Libreoffice 4.0.3.3 iyo KDE SC 4.10.3, oo dhammaantood ku jira nooca 64 Bit. Maaddaama ay tahay nooc cusub, weli waxaad ka heli kartaa iswaafaqla'aan, tusaale ahaan luqadda rakibayaha ama desktop-ka mar la rakibay, laakiin Blog Pisi waxay na tusayaan sida loo saxo dhammaan faahfaahintaan.
Maqnaanshaha muuqaal la isku halleyn karo (maxaa yeelay ma awoodin inaan soo dejiyo iso) waxaan kuu dhaafayaa shaashad ay shirkadda Yoyo nala wadaagtay G +.
Soodejiso Pisi Linux 1.0
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Pisi Linux Marka ugu horeysa ee la heli karo
28 faallooyin, ka tag taada
Server-ka wali dhibaatooyin buu leeyahay maxaa yeelay ma awoodin inaan galo soo dejinta mashruuca.-
Bisadda ku jirta astaanta astaanta u muuqata g4y uu aad u fiican yahay. haha ..
[hyper troll comment] Hagaag, Turkidu waxay had iyo jeer jeclaayeen inay mansebos ku leeyihiin musqulahooda! Faaaaaggggggsssss !!!! xD [/ hyper troll comment]
Haa, muuqaalka ayaa ah "ilmo" yar.
Ku jawaab qashin-qubka
Markii ugu horraysay ee aan arko astaanta waxay umuuqatay sida distro loola jeedo carruurta.
Ku jawaab gnamboo
Waxaad ku leedahay astaamo midabyo kale iyo astaamo ku jira keydka rasmiga ah ee PisiLinux ee github 🙂 https://github.com/pisilinux/playground/tree/master/SaPpHiRe
Ku jawaab SaPpHiReGD
Mid ka mid ah oo dheeraad ah oo loogu talagalay qoyska, soo dhawow iyo guusha mashruuca
Waad ku mahadsantahay faafitaanka 😉
Waxaan kuu sheegayaa in isku xirka saxda ah ee lagu soo dejinayo ISO ee beta v2 kani yahay kan
Halkaas waxaad ka heli doontaa ISO iyo faylasha loo yaqaan 'checksum', laakiin waxay u muuqataa in xilligan xaadirka ah server-ka PisiLinux uu hoos u dhacay 🙁
Waxaan la xiriiri doonaa Turkiga si aan u ogeysiiyo oo aan ugu soo raro ISO-da Dropbox-ka iyo Wuala si aan u helo taageero aan la wadaago.
Waxaan kaaga tagay sawir kale oo ah Pisi Linux 1.0 beta v2 «Dream»
Ku soo jawaab Yoyo Fernández
Hada waan saxay. Ama si fiican, markii isku xiridu iga tagto 😀
Haye subax wanaagsan.
Maxayse noqon laheyd faa iidooyinkiisa iyo qasaarihiisa? maxaa yeelay waxaan arkaa inay jiraan wax badan oo ka badan oo qaswadayaal ah waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa ka faa'iida iyo qasaarooyinka kasta ee diro leh, salaam
Xaqiiqdu waxay tahay in distoorkani uu adeegsanayo nidaamka ugu dambeeya ee alaabooyinka wax lagu duubo ee jira (pisi), taas oo noqon doonta wax cusub oo run ah, intaas wixii ka dambeeya anigu kuuma sheegi doono, ma aqaano haddii ay isticmaasho wax sawirqaade rakibayaal ah ama xirmooyinka ku jira keydadka; in kasta oo SolusOS ay geynayso dhammaan keydka Debian-ka bakhaarrada pisi, sidaa darteed maahan in waxyaabo badan loo baahan doono marka hore, haddii kalese, waxa muhiimka ah, baakidhku kuma adka qaabkan, runtiina waxay leeyihiin qalab wanaagsan taasi.
Waxaan ku dhamaan karaa in muddo ah iyadoo kuxiran duruufaha ... inta soo hartay, haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato, waxbadan ka baaraandeg qaybta pisi, taas oo ah wax cusub iyo kala duwanaanta.
Ma ogtahay haddii ay la imaan doonto Gnome Shell?
Ku jawaab kennatj
Waxaan horeyba ulahadlay asxaabtii turkiga, waxay hada kashaqeynayaan inay soo celiyaan serverka oo ay helaan soo dejinta iyo keydinta ISO markale.
Si kastaba ha noqotee, sidaan horay u sheegay, waxaan ku rari doonaa ISO Dropbox-ka iyo Wuala si markaa ay jiraan meelo badan oo aan kala soo bixi karo.
Waxaan ku dhaafi doonaa wax walba nolosha Pisi.
Serverku hadda wuu shaqeynayaa markale, waxaad kala soo bixi kartaa ISO dhib la'aan.
Ha ilaawin inaad joojiso barta Pisi Life (bidix by elav ee maqaalka) si aad u ogaato talaabooyinka rakibida kadib haddii aad go'aansato inaad isku daydo beta v2 this 😉
Marka ugu horeysa waxaan arkaa KDE (iyada oo aan loo habeyn isticmaalaha) oo aan jeclahay 😀
Shaqo aad u fiican.
KDE leh bar-tilmaameed madow ... # like
# afduub kadib
Hmm… fiican KDE SC oo si fiican loo hirgaliyay lana cusboonaysiiyay bil kasta dhawr maalmood ka dib markii nooca cusub lagu dhawaaqay; Nidaam hawlgal saldhig leh oo cusbooneysiin nus-rogid ah si loo hubiyo xasilloonida ugu badan iyo dhulka isticmaalaha (codsiyada isticmaalayaasha sida GIMP, Blender, Calligra, LibreOffice, FF, Chromium, Quassel, Weechat, iwm.) Had iyo jeer illaa taariikhda ugu dambaysa , oo leh maamule xirmo oo aad u fiican iyo isdhexgal wanaagsan oo garaaf ah iyada iyo xididdada qoto dheer ee qaybinta gaarka ah?
Wax kale ha fiirin: http://www.chakra-project.org
Waxaa lagu heli karaa 64bits iyo 64bits xD
Iyo, iyagu waa distros casri ah.
Haddii aysan ahayn maxaa yeelay haddii aad rabto qaar ka mid ah barnaamijka gtk oo aan caan ahayn, waa inaad soo ururisaa, waxay noqon laheyd wax weyn distro :).
Isku-dubbaridka haddii aad rabto waa mid otomaatig ah laakiin haddii aad doorbideyso inaad gacantaada saarto oo aad ku soo ururiso waxaad jeceshahay adigana waad sameyn kartaa.
Ma haysto Gentoo habeyn wanaagsan (maahan wax qaybsi il ah) laakiin CCR waxay kuu oggolaaneysaa ciyaar cayiman oo meelaha kale ee galka ah ay dhab ahaan macquul ahayn.
Ka sokow inuu yahay KDE distro la soo ururiyey iyada oo aan la isku hallayn ama GTK la gelin, saldhigga rakibidda (rakib cusub) caadi ahaan waa 1 gig ka fudud inta kale ee KDE distros oo sidoo kale ku jira dhammaan noocyada GTK. 😉
Waa mid otomaatig ah haddii ay ku jirto ccr, laakiin marar badan xirmadu ma taal oo waa inaad maciinsataa aur, laakiin marar badan ku tiirsanaanta ma jirto oo waad soo uruurineysaa ama ka xadi kartaa meelaha lagu keydiyo archlinux (maahan wax fiican).
Wankii ..., wax ka yar ama ka yar ma keydin karo 200 ama 300 Mb oo wan ..., waxaan xasuustaa ka tagista chakra muddo bil ah oo isku xigta, waxaan wada cunay inta u dhaxeysa 1,5 g / 2 g, kubuntu waxay gaartay ugu badnaan 2,5.
khafiif ah dijo
Pardus aad u fiican Ayaan markasta jeclaa qaabkaas. Waxaan rajeyneynaa in wax walba ay sifiican ugu socdaan qalqalkan, salaan!
Ku jawaab ferchometal
Sida muuqata waxa kaliya ee "xun" ee ku saabsan distoorkan ayaa ah inuu adeegsado astaamaha Faenza (ama Faience, ma aqaano) asal ahaan.
Waxaan u maleynayaa inay tahay mowduuc fiican, laakiin "maadaama aysan 'la socon' KDE".
Ku jawaab gustawho
Buugga Isha dijo
Yoyo sida had iyo jeer u dhageysato muusikada caadiga ah xitaa haddii ay ka socoto supermarket.
Jawaab Manuel de la Fuente
Ma qaybin adag baa in la barto mise waxay la mid tahay Debian?
Sifiican uma fahmin, iskudhafka .PISI
Waxaan tijaabinayay nooca beta dhowr maalmood waana quruxsan yahay, wuxuu u shaqeeyaa si habsami leh oo dhakhso leh. Waxaan sidoo kale isticmaalay maareeyaha xirmada GUI iyo terminal labaduba sifiican ayeyna u shaqeeyeen ilaa iyo hada. Rakibaadda ugu dambeysa waxay ka tagaysaa multimedia, internetka iyo otomatiga xafiiska shaqeynaya. Kawaran haddii ay tahay inaad ku habeysid luqadda iyo qaabka kumbuyuutarka qaybta kontoroolka iyo feylka goobta (/etc/env.d/03locale), Waxaan rakibay xoogaa feyl luuqad ah oo maqan si ay si sax ah ugu muujiso magacyada codsiyada iyo faylasha . Codsiyada gtk waxaa lagu muujiyaa qaabka oksijiinta, iyagoo ka farxinaya isha. Hal faahfaahin, haddii aad u baahato inaad habeysid isticmaalka taabashada, waxaad rakibi kartaa codsiga GUI ama waad tafatiri kartaa feylka 50-synaptics.conf.
Bakhaarka ayaa keenaya tiro wanaagsan oo xirmooyin ah si ay u shaqeeyaan, waxaan qiyaasayaa inay sii kordhayaan marka nooca ugu dambeeya la sii daayo.
Waxyaabaha la beddelayo
Debian: keydka aan rasmiga ahayn ee Multimedia waxaa loo arkaa mid amni darro ah